नागरिकको खबरदारीले बाह्र वर्षपछि सङ्लियो... :: भानुभक्त :: Setopati
शनिबार, चैत ९, २०७५
नागरिकको खबरदारीले बाह्र वर्षपछि सङ्लियो त्रिशुली
प्रशन्न पोखरेल काठमाडौं, चैत ७
हिउँदमा पनि बर्खाझैं धमिलो बग्ने त्रिशुली नदीको पानी दुई सातायता सङ्लिएको छ।
धमिलो त्रिशुली सङ्ल्याउन बाह्र वर्षदेखि खबरदारी अभियान चलेको थियो। धादिङ मलेखु क्षेत्रका आठ/दश जनाले सुरू गरेको त्रिशुली बचाऊ अभियानले बृहत रूप लिएपछि सङ्लो त्रिशुली बग्न सम्भव भएको हो।
डेढ वर्षदेखि त्रिशुली बचाऊ अभियानको नेतृत्व गरिरहेका धादिङका श्रवणकुमार त्रिपाठीले चेतनामुलक खबरदारी र संघर्षबाट सङ्लो त्रिशुली बगाउन सफल भएको बताए।
‘धमिलो त्रिशुलीमा डुंगा चढेर कन्सर्ट कार्यक्रम गरियो। पञ्चेबाजासहित दोहोरी पनि गाइयो। त्यसपछि मिडियामा त्रिशुली धमिलो भयो भन्ने समाचारले प्राथमिकता पायो’ संयोजक त्रिपाठीले सेतोपाटीसँग भने, ‘प्रधानमन्त्री, वातावरण मन्त्री, ऊर्जा मन्त्रीलगायतलाई भेटेरै त्रिशुली सङ्ल्याउन खबरदारी गर्यौं।’
वन, नदीलगायतबाट पाँच सय मिटर क्षेत्रभित्र फिरफिरे उद्योग चलाउन पाइँदैन। तर प्रशासनको आडमा बालुवा तस्कर र जनप्रतिनिधिले नै फिरफिरे चलाउँदै आएका थिए।
मापदण्ड पूरा नभएका यस्ता उद्योगले माटो मिसिएको बालुवा धोएपछि त्रिशुली धमिलो भएको त्रिपाठीले बताए।
‘मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, प्रदेश ३ का कानून मन्त्री शालिकराम जमरकट्टेल, धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्यामप्रसाद भण्डारी र त्रिशुली बचाऊ अभियानको सक्रियतामा दुई सातादेखि त्रिशुली सङ्लो बगेको हो’ संयोजक त्रिपाठीले भने, ‘फेरि फिरफिरे सञ्चालन गर्न दिने चलखेल भएको छ। कति दिन टिक्छ।’
अवैध सञ्चालनमा गरेका ती फिरफिरे उद्योगमा फागुन अन्तिम साता विद्युत काटिएको थियो।
पानी प्रदुषित हुनबाट रोक्न त्रिशुली सङ्लो बनाउने अभियानमा लागेको उनले बताए।
‘त्रिशुली सङ्लो बगेपछि मानिसहरू खुसी भएका छन्। तस्करले निरन्तर चलखेल गरेका छन्, कति दिन टिकाउन सकिन्छ भन्ने चिन्ता छ,’ उनले भने।
समन्वय समिति धादिङका प्रमुख जगन्नाथ नेपालको संयोजकत्वमा मंगलबार बसेको बैठकले जिल्लाभित्र रहेका फिरफिरे उद्योगबाट निस्केको पानी सिधै नदीमा मिसाउन नपाउने निर्णय गरेको छ।
[caption id="attachment_143402" align="alignnone" width="542"] केही वर्षपहिले हिउँदमा पनि धमिलो बग्थ्यो त्रिशुली। तस्बिर : सेतोपाटी।[/caption]
प्रजिअसहित गाउँपालिका अध्यक्षहरू सहभागी बैठकले राजमार्ग र सडकबाट १०० मिटर क्षेत्र बाहिर मात्रै फिरफिरे उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय गरेको छ।
‘उद्योगबाट निस्कने फोहोर पानी पूर्ण रुपमा सङ्ल्याएर मात्र पानीको निकास दिने, धमिलो पानी थिग्राउन तीन तहको टयांकी बनाएर सङ्लो पानीमात्र बाहिर पठाउने’ निर्णयको दोस्रो बुँदामा भनिएको छ।
पुनर्निर्माणका लागि नदीजन्य पदार्थ (ढुंगागिट्टी र बालुवा) आवश्यक पर्ने भन्दै पुनः फिरफिरे सञ्चालन गर्न दिने बैठकले निर्णय गरेपछि बाह्र वर्षपछि सङ्लिएको त्रिशुली पुनः धमिलो हुने सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
जनप्रतिनिधि नै अवैध फिरफिरे सञ्चालन गर्ने चलखेलमा लागेकाले त्रिशुली सङ्लो बगाइराख्ने अभियानलाई दीर्घकालीन बनाउन सबैको सहयोग आवश्यक पर्ने त्रिपाठी बताउँछन्।
धादिङका प्रजिअ भण्डारीले सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर मात्रै उद्योग दर्ता गरिने भएकाले अब जथाभाबी फिरफिरे सञ्चालन नहुने बताए।
‘ढुक्क हुनुस्, सङ्लो त्रिशुली अब धमिलो हुन्न। मापदण्ड पूरा गर्ने उद्योग मात्रै चल्छ। फिरफिरे उद्योगले पानी सङ्ल्याउने ट्याङ्की बनाएपछि निरीक्षण गरेर उपर्युक्त भएमा उद्योग चलाउन दिन्छौं,’ प्रजिअ भण्डारीले सेतोपाटीसँग भने।
त्रिशुली धमिल्याउने मुख्य दोषी बालुवा धुने मेसिन फिरफिरे सञ्चालक हुन्।
उनीहरुले ४० प्रतिशत मात्रै बालुवा भएको माटो धोएर धमिलो पानी सिधै त्रिशुलीमा मिसाउँदै आएका थिए।
नुवाकोटदेखि धादिङसम्म हजार हाराहारीमा फिरफिरे सञ्चालनमा छ। धादिङमा मात्रै ४५० बालुवा धुने फिरफिरे छन्। यीमध्ये ७३ वटा फिरफिरे उद्योग धादिङ घरेलु कार्यालयमा दर्ता छ। अरु उद्योग मापदण्ड अनुसारका छैनन्।
त्रिशुली जलाधार क्षेत्रको नुवाकोटस्थित बेलकोटगढी तथा धादिङको गजुरी गाउँपालिकामा फिरफिरे धेरै छन्।
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत ७, २०७४, ०८:३९:१६
जनमत संग्रह आवश्यक छैन: रामचन्द्र पौडेल
भिडियो स्टोरी : उच्च रक्तचापलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, के उच्च रक्तचापको औषधि सधै‌ंभरि खानुपर्छ ?
'महिलाले विस्थापित गर्छन् भन्ने डरमा छन् पुरूषहरू'
जनकपुर-जयनगरमा एसीसहितका रेल कुद्ने
धुलिखेलमा ६५ पार्क बन्दै, सेनाको ब्यारेक सारिने
गण्डकी प्रदेशबाट ४८ हजार विद्यार्थी एसइईमा सहभागी हुँदै
अब थप ‘डलरवादी’ हरू सडकमा आउनुपर्छ सञ्जीव पोखरेल
राजाको होली मान्दा पनि रिसायौ कि तरुनी ! तीर्थबहादुर श्रेष्ठ
भिडियो ब्लग: के नेपाल भन्ने देश महिलाको थोरै, पुरुषको धेरै हो? अमित ढकाल
तपाईं के थरी? यो साधारण प्रश्न, जसले घाइते बनाउँछ दिवाकर बागचन्द